Ụbọchị My Pet » Gịnị mere na ị ka na Single – Ga-esi Ọ
emelitere ikpeazụ: Nov. 15 2019 | 6 min agụ
Ihe niile m na-na na mụtara banyere esemokwu mkpebi, M mụtara na Kenny Rogers. M na-echeta otu abalị azụ na 1977: M na-efu, ọkụkụ na karama, na-eme ka nsogbu n'ụlọ. N'ezie, M dị afọ ise, otú ị pụrụ ikwu na m na-amaghị mma, ma Kenny agaghị ekwe ka m kwụsịrị nko. N'oge ahụ, ọ maara ukwuu n'ime ya 1974 kụrụ, Lucille. Ma, dị ka biya asọpụta na elekere ticked, m na-ekwu banyere otú m na-alụ ọgụ na m ochie nwaanyị, Kenny tọrọ ya niile m dị ka larịị dị ka Texas okpomọkụ igwe.
“Ị mara mgbe ka hold'em, -ama mgbe fold'em.”
Translation: Ọ bụrụ na ị na na na na adịkwa ọgwụgwụ nke otu arụmụka, ị ka mma ịmụta emechi hell na ịrịọ mgbaghara.
A na enyi nwanyị nke m na n'ezie imesi n'ihe banyere ụdị uwe-eyi gaa a enyi agbamakwụkwọ. Ọ bụ na a Sunday ehihie na August, otú nwa nọ, acha uhie uhie bụ kwa oké, na-acha ọcha bụ ihe doro anya ọ dịghị-enweghị. Ọ bịara na-ahọrọ na-ekpo ọkụ-na-achọ lavender silk nọmba, nke mere ka anyị ma nnọọ obi ụtọ . . . ruo mgbe anyị na-aga na hụrụ na ọ na-eyi uwe dị ka ihe niile bridesmaids.
Nke ahụ abụghị ezigbo nsogbu. The ezigbo nsogbu bụ na m na-achị ọchị. Ukwuu n'ime n'ihi na ọ bụ na-akpa ọchị. Ma eleghị anya, a akụkụ nke m chere na anyị nwere ike egwuregwu anyị n'ụzọ gara aga a obere mgbaka, karịsịa ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe anyị pụrụ ime banyere ya. Uh eem. Ọ bụghị naanị na e na enyi m nwanyị mkpasasị uche site wodrobu myirịta, ma m jocular n'ụzọ gwuru m a onu nke nke Ukwu kaniyon. Mgbe a na nwunye nke nkeji nke na-agbalị ime ka ya na-ahụ Mkpa ọkụ n'akụkụ nke ọnọdụ, M ghọtara na naanị ihe m pụrụ ime bụ ịrịọ mgbaghara ịkwasi na ọmịiko ya na ya ọnọdụ. A ụbọchị ole na ole na a dum ọtụtụ anya mmiri e mesịrị, anyị mere elu. Ma ọ bụrụ na nwere m chetara Kenny ndụmọdụ si na--na-aga, M gaara azọpụta anyị ma a dum mfịna.
“Mara mgbe pụọ, mara mgbe na-agba ọsọ.”
Translation: Ọ bụrụ na ị na-apụghị-ekweta na okwu na-adabaghịrị, ị na n'ihi na ụfọdụ nnọọ ogologo abalị akasiakde ke n'uko ma ọ bụ na-ehi ụra na n'ihe ndina.
Nkọwa: N'ikwere na-ekwekọrịtaghị bụ otu akụkụ kasị mkpa nke na-echefu Ọ, n'ihi na e nwere ihe ọ bụla mkpezi na-aga na-kwụpụ na onyinye nturu ugo ị na-ezo n'ihi na ị na- 65 percent ziri ezi na ọ bụ 35 percent nri. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere ndị, ọbụna ma ọ bụrụ na ị tallied nile esemokwu ihe na ị na mgbe merie gị mụrụ ná mmehie, ọrịa na-asian enyi nwoke, ihe ị ga-ikekwe na-eme na ha? Ọ dịghị ihe. “Mmeri” arụmụka na-ewe oge dị ka na-emeri 3,000 Skee-Naa tiketi — ma banyere Ẹkot uru. Ya mere, ọ gwụla ma a njuaka ududo mgbaaka na Superballs dị gị mkpa, ọ bụ n'ozuzu kacha mma ka dị nnọọ ịhapụ ya naanị.
“Ị dịghị mgbe ịgụ gị ego gị mgbe ị na-sittin’ na tebụl / E Aga-ezuru countin’ mgbe dealin mere.”
Translation: Ekele, ị merie ndị agha. Ugbu a na-a na-eme amara-eto eto na mgbe welite isiokwu ọzọ.
Nkọwa: Mgbe ụfọdụ ihe ndị doro anya-ịkpụ. Ọ malitere a agha na a Ihọd fim. O nwetara mmanya na-egbu ma mee ka a nzuzu nke ya onwe ya na a nri abalị ọzọ. O chefuru na i nwere atụmatụ maka nri abalị ma hapụrụ gị na-eche awa abụọ. Na ndị dị otú ahụ, ọ dịghị nti ngọpụ. Nke a apụtaghị na ọ ga-adịghị agbalị-echepụta otu, ọ na-apụtaghị na ọ pụghị cobble ọnụ ihe na-ada ọkara ezi uche. Ma ihe ọ bụla ya ebumnobi, omume ya ndị na-ezighị ezi, na ọ bụ Na Na nzọụkwụ na ịrịọ mgbaghara. Ma gị, klas omume nke na-ị na-, -anabata ya mgbaghara ka ọ na-aga. Ọ dịghị allusions ka gara aga nghọtahie. Ọ dịghị akpakọba mgbọ maka ọdịnihu agha. Na-enweghị n'ezinụlọ-eme ihe ike ike kwuru. Ị nwetara ya, ọ bụ na-ezighị ezi, gaa ihu!
Otu di na nwunye m maara ha òkè nke alụmdi na nwunye na squabbles. Otu mgbede, ụbọchị mgbe a touchy esemokwu na ha kwetara na patched elu, di bịara n'ụlọ abụọ ùkwù okooko osisi. N'agbanyeghị “udo” na ha mere na Ifuru ogbugbu, nwunye nọgidere dị ka pissy na nkume ihu dị ka ọ bụrụ na ọ dị nnọọ akpụkpọ ya cat. Adịghị mma. Mgbe ị na-eme ka elu, ị nwere ka ihe na-aga, karịsịa n'ihu ndị ọzọ. M maara ọzọ di na nwunye ebe nwunye na mgbe niile kparịrị ya na di ya n'ihi na ọrụ ya na-ahọrọ (onye so dee), ọ bụ ezie na ọ lụrụ ya maara nke ọma ya ọ họọrọ ịrụ ọrụ. Ọ bụghị nanị na ya na-adịghị mma jibes n'ezie emetụta obi ike ya, ma o mere ka onye ọ bụla nọ ha gburugburu nnọọ iru ala. N'ezie, okwu “Ndo” adịghị agwọ niile, ma ọ bụ na-eme a di na nwunye nke ùkwù okooko osisi, ma ihe ọzọ pụrụ ikwe gị omume-eme otu ugboro ihe niile e kwuru? Olee uru dị n'ebe hashing si otu nke ugboro ugboro?
Ọ bụ otu ihe na-niile banyere òkè mmetụta, na ihe ọzọ mgbe niile na-eti a nwụrụ anwụ ịnyịnya n'ime ụfọdụ jọrọ njọ, nnyapade gluu. M ga-emeghi gị atụnyere oké ọnụ ahịa mmekọrịta ịnyịnya na-dabeere gluu, ma Kenny ga, na ebe ọ bụ na e ji obi ụtọ na di na nwunye kemgbe 1997, Echere m na ị ga-ege ya ntị.
E nwere ihe dị otú ahụ ka a ike iwe n'obi. M na-agba ike iwe n'obi megide: (1) m akụ; (2) na Columbia House Music Club; (3) a Ihọd onye gwara m a truckload nke ụgha, na-eme ka ọdachi na were afọ ka untangle; (4) a pụọ ​​na-adịghị ekwesị na-elekọta a cat anyị na mgbe e mesịrị sniped na ọ bụ n'ihi na ọ nọ na-enye anyị niile mkpa na ozi; (5) otu n'ime ndị m na mahadum prọfesọ; (6) Ọkàikpe Scalia; na (7) a eyen onye na-plagiarizes m dere na internet. M enweghị mmasị n'ebe ndị a niile ndị mmadụ na-entities dabeere na ha n'oge gara aga (na, na ụfọdụ, na-aga n'ihu) misdeeds, na m adịghị agọnahụ ya. M gaghị echefu ya, M agaghị owu ọ bụla platitudes banyere bygones, ma ọ bụrụ na m na-ahụ ihe ọ bụla nke ha na-eje ije n'okporo ámá, M ga-Flash ha a ruru unyi anya dị ka ị ga-ekweghị. Ọ bụghị na ị pụrụ n'ezie ịhụ Columbia House Music Club na-eje ije n'okporo ámá, ma ị ga-esi echiche. M mụtara a ogologo oge gara aga na ike ndụ n'udo na a eluigwe na ala na nke ị na-enwe ndị iro ga-azọpụta unu afọ nke nhụsianya.
Ma iwe n'obi megide ndị ị na-kwesŽrŽ n'anya, ma ọ bụ dị ka, ma ọ bụ ike metụtara? Ndị na-adịghị otú ahụ ike. The oké ihe banyere ịbụ iwe na mahadum prọfesọ bụ na m na-agaghị ahụ ya ọzọ. N'ezie, M na-adịghị mkpa iji nweta mkpebi nke mmetụta m na ihe ọ bụla nke ndị ikpe, na m na-adịghị mkpa na-agbaghara. Gịnị mere m ga-agbaghara ndị pụọ? Ọ dịghị mgbe ọ rịọrọ mgbaghara. The hell na ya! My cat nwụrụ! Bad ịma!
Ma mgbe ị na-eche dị ka ị na e mejọọ site a ị na-eche banyere, ọ bụ ụdị dị ka abụ “Ahịrị, Ahịrị, Ahịrị gị Boat,” na na onye ọ bụla maara otú na-ya na-aga, na dịghị onye maara na keugwu ụzọ agwụ ya. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị akwụsị ya, ị ga-ifufe elu ndị nwere otu mmekọrịta enyi gị nwoke na m nwere na m akụ, ma kwere na m, ị na-achọghị na-eme.
N'ezie, ụzọ ị na-etinye pụọ gị iwe na-adabere obere ihe ndị ị na-arụ ọrụ na. Ọ bụrụ na ị na-kechioma, ị nwere ihe n'eziokwu mkparịta ụka banyere ya. Ị ga-arụ ọrụ ọ bụla mere agha, na ị ga na-eche ala na nsogbu na-edozi. Nnukwu ihe ize ndụ bụ eleghị anya “na-emeri” esemokwu — nke ị ga-eme site n'oge ruo n'oge, n'echiche nke adịrị a ewepụghị-esi, erughị eru mgbaghara — na mgbe ahụ na-eche na ọ dị mkpa na-aga azụ na “teasingly” mee ya ugboro ugboro, nke ị na-ekwesịghị ime. Ọ bụrụ na-atọ gị ụtọ a na-echetara ihe niile ị na na mgbe ihe ọjọọ, mechie ichefu ya.
Ihe ndị mmadụ ihe siri ike mgbe ị na-ịgbasi a otutu mgbalị, na mgbe ọ bụ n'elu, ị ka na-adịghị eche dị ka ị na-edozi ihe ọ bụla. Ị na a na-awa a dubious nkọwa, ma ọ bụ na ị ka na-eche na ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ ka na-eche na ị bụ na-ezighị ezi, na ọ dịghị ego nke okwu agbanweela onye ọ bụla n'uche. Ihe a ga-eme?
Mgbe ụfọdụ, ndị smartest ihe bụ ịjụ onwe gị nke a: Gịnị bụ ihe kacha njọ ga-eme ma ọ bụrụ na m kpebie mgbe na-eche banyere nke a ọzọ? Women — karịsịa ndị inyom na-enwetụbeghị nso, platonic enyi ya nwoke — wildly ileda a ma ama nke “Oh, Chukwu m, ị ga-iberibe dobe ya” na listi nwoke mkpesa banyere ndị inyom. Ọ bụrụ na m na-ahọtakwara otu ebe nke ndị nwere anyị na a mwepu, ọ ga-abụ na nke adịghị eche na-ekwu okwu na ndụ nke ihe niile na-eme ruo mgbe onye ọ bụla aka bụ a mịrị amị-esi husk. Mgbe m nwetara n'ime a pụtara kpụ ọkụ n'ọnụ email mgbanwe na nwoke enyi ndị na-arụ ọrụ na m ọrụ, o wee na niile ụtụtụ, na mgbe ahụ banyere 11:00, o zitere m onye na kwuru, “Anyị ga-abụ ndị enyi ọzọ site 11:30, n'ihi na-echeta, nke ahụ bụ mgbe anyị nwere na-ahapụ maka nri ehihie.” Ma anyị bụ ndị. Ihe! Lụọ n'elu. N'ihi na Ọ bụghị n'ezie okwu, na mgbe ọ na-adịghị mkpa n'ezie, i nwere ike dị ikwusa ya n'elu. Ma ọ bụ na. Ị pụrụ ọbụna na-eti mkpu “Ihe!” ọ bụrụ na ị chọrọ, ma jide n'aka na Ihọd maara ihe ị na-ekwu okwu banyere, ma ọ bụ ị ga-esi na-akpa ọchị anya.